China MAH မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောရေစုပ်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Depump Technology
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အလျားလိုက် slurry pump > အကြီးစား Duty Slurry Pump
စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာအတွက်ချောမွေ့သောသို့မဟုတ်မာကျောသောအစိုင်အခဲအမှုန်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန် MAH မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောပန့်များကိုအသုံးပြုသည်။ ရွှံ့နွံစုပ်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီရောက်သည်။ ၎င်းသည်စီးဆင်းမှုကုဗမီတာ ၁၅၀၀၀ ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ တံဆိပ်တံဆိပျထုပ်ပိုးတံဆိပျသို့မဟုတ်အရန် impeller တံဆိပျကိုလက်ခံ။ ကျောက်မီးသွေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်သတ္တုတွင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သတ္တု၊ ကျောက်မီးသွေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အကြီးအကျယ်အသုံးပြုသည်။
MAH heavy duty slurry pump များသည်သတ္တုတွင်းနှင့်အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပွန်းစားခြင်းနှင့်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ slurry များကိုကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော heavy duty အလျားလိုက် slurry pump များဖြစ်သည်။
Centrifugal Slurry pump ဆိုသည်မှာ centrifugal force (pump the impeller ၏လည်ပတ်ခြင်း) အားဖြင့်အစိုင်အခဲနှင့်အရည်ရောထွေးသောမီဒီယာများ၏စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုအလတ်စား၏စွမ်းအင်သို့လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသည့်စက်ယန္တရားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ တူးဖော်ခြင်း၊ သတ္တုလုပ်ငန်း၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်ရေနံလုပ်ငန်းများတွင်ဖြစ်သည်။
သတ္တုတူးဖော်ခြင်းအတွက်အကြီးစား Duty Slurry Pump ရွှေတူးဖော်ခြင်းအတွက်အကြီးစား Duty သဲတူးဖော်ခြင်း Slurry Pump အကြီးစား Driver Horizontal Centrifugal Slurry Handling Pump
လျှပ်စစ်သတ္တုတွင်း Slurry Pump
Electric Mining Slurry Pump သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်းလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်သော impeller နှင့်ရှေ့အင်ဂျင်အကြားရှိနေရာကိုညှိရန်လွယ်ကူသည်။
Heavy Duty Electric Sludge Pump
Depump သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပန့်ထုတ်လုပ်သူ များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး စုပ်စက်နယ်ပယ်တွင် နှစ် 20 ကျော် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Depump လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် Electric Sludge Pump၊ ရေစုပ်စက်များနှင့် submersible pump များ ကဲ့သို့သော centrifugal pumps များ ပါဝင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Heavy Duty Electric Sludge Pump ကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
Heavy Duty Sand Processing Slurry Pump
အကြီးစား သဲလုပ်ဆောင်ခြင်း slurry ပန့်သည် အသုံးများသော စက်မှုပန့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူအချို့သည် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ခက်ခဲသောပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်၊ ဤဆောင်းပါးသည် သင့်အား ကူညီနိုင်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော အကြီးစား Duty Slurry Pump ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Depump Technology သည်တရုတ်ပြည်၏ကျော်ကြားသော အကြီးစား Duty Slurry Pump ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များရှိပြီးအမြောက်အများထုပ်ပိုးပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းရဆုံး၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!